मेरो प्यारो कर्लुंग - Dainik Nepal
शनिबार, ५ पुष २०७६
मेरो प्यारो कर्लुंग
डा. बच्चु कैलाश कैनी २०७६ पुष ५ गते ८:३३
कर्लुंग मेरो पितापुर्खाहरुले बसोबास गरेको ठाउँ हो । मलाई प्यारो लाग्ने संसार कै एक ठाउँ मध्ये कर्लुंग पनि एक हो । कर्लुंगसंग मेरो भावानात्मक सम्बन्ध छ । त्यहाँ मेरो पुर्खाहरु लगायत मेरो हजुरबुवा, मेरो बुवा र सबै परिवारले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण धेरै बर्ष बिताउनु भयो । म त्यहाँ नजन्मे पनि त्यही कर्लुंगको काखमा रहेको टार भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ । त्यहाँ मैले आफ्नो बाल्यकालको करिव नौ बर्ष बिताएँ । त्यसपछि हामी त्यहाँबाट करिव दश मिनेट पैदल यात्रामा पुगिने पृथ्वी राजमार्ग संगै रहेको कमलाबारी भन्ने ठाउँमा बसाई सरेको हो ।
कर्लुंग भन्ने ठाउँको नाम के कसरी रह्यो, यो त मलाई थाहा छैन । तर, मलाई यति थाहा छ यहाँ उ बेलामा हाम्रो गाउँ पंचायतको कार्यालय थियो । पछि गाउँ पंचायत गाउँ विकासमा परिणत हुँदा पनि हाम्रो गाउँको मुकाम यहि नै रह्यो । अहिले नगरपालिकाको एक हिस्सा रहेको कर्लुंगमा वडा कार्यालय रहेको छ । उहिलेदेखि अहिलेसम्म धेरै दशकसम्म धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए पनि स्थानियहरुको कर्लुंग प्रति जे जस्तो अगाध आस्था र बिस्वास रह्यो त्यसैको फलस्वरूप यो ठाउँ अहिलेसम्म पनि यो भेगको राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्र रहन सफल भयो ।
कर्लुंग प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । कर्लुंग डाँडाको टाकुरोमा रहेको ठाउँ हो । त्यहाँबाट प्रस्ट रुपमा उत्तरतिर थुप्रै हिम शृंखला, पहाड, खोला नाला, खेतबारीहरु देख्न सकिन्छ भने दक्षिण तर्फ पनि धेरै पहाड र रमणीय दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । त्यसैगरि त्यहाँको मौसम पनि गर्मीमा सधै चिसो हावा चल्ने हुनाले एकदम उपयुक्त छ भने जाडोमा पनि त्यहाँ त्यति जाडो हुँदैन । साथै कर्लुंग धेरै किसिमका फलफूल, खेतीपाती, अन्न आर्जन र पशुपालनका लागि पनि उपयुक्त ठाउँ हो । कर्लुंगको सबैभन्दा उच्च स्थानमा कोट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ हरेक दशैंमा पुजापाठ गर्ने र बलि दिने प्रचलन छ । त्यसैले धार्मिक हिसावले पनि कर्लुंग महत्वपूर्ण ठाउँ हो । यो ठाउँ छोटो छुट्टि मनाउन वा घुमघाम गर्नाका लागि उपयुक्त पर्यटकीय स्थल हुन सक्छ । तर, उचित प्रचार प्रसार र आवश्यक पूर्वाधार बिना कर्लुंग छाँयामा परेको छ ।
हामी सानो हुँदा दशैँमा कर्लुंग नजाने हो भने हाम्रो दशैं अधुरो र अपुरो हुन्थ्यो । हामी थुप्रै केटाकेटी, युवा, बयस्क र बुढापाकाहरु दशैको फूलपाती वा अष्टमीका दिन कमलाबारीबाट हिंडेर कर्लुंग जाने र त्यहाँबाट देउराली वा छिर्कने निस्कंदै घर फर्कने प्रचलन थियो । यसले गर्दा बर्षको कम्तिमा एकपटक कर्लुंग पुगिन्थ्यो । अहिले परदेशमा आएपछि पनि यो सम्झना एकदम ताजा र मिठो छ । कुनै दिन यो परदेशी फर्केर नेपाल बस्न पुगे पछि ती दिनहरु फेरी पनि पक्का फर्कने छन् ।
कर्लुंग त्यति बेला सानो तिनो किनमेलको केन्द्र थियो । उति बेला हामी सानो हुँदा त्यहाँ एक दुई वटा किराना र चिया पसलहरु थिए । करिव २०२७ -२८ साल तिर होला मेरो बुवा स्व मेघनाथ कैनी ले त्यो ठाउँमा सानो कपडा पसल राख्नु भएको थियो रे । बन्दीपुरबाट सामान ल्याएर त्यहाँ बिक्री गर्ने प्रचलन थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले । अहिले पनि त्यहाँ दुई चार वटा किराना र चिया पसलहरु छन् । उ बेला बुढापाकाहरु बस्ने र गफगाफ गर्ने ठाँटी र चौतारोहरु पनि त्यहाँ छन् । म सानो छंदा यिनै चौतारो र ठाँटीमा बसेर बुढापाकाहरुको गफ सुनेको र चिया पिएको अहिले पनि ताजा याद छ ।
कैनीहरुको उद्गम थलो पनि कर्लुंग हो । यो अर्थमा पनि कर्लुंग मेरो लागि अति नै प्यारो ठाउँ हो । मेरो हजुरबुवाले भने अनुसार कैनीहरु पहिले पाल्पाका गिरीहरू हुन् रे ! उहाँका अनुसार तनहूँका राजाले उति बेला राजकाज चलाउन र लडाईंका बेला गिरीहरूसंग पैसा लिएर कर्लुंगको एक भू-भाग विर्ता दिएका थिए । अनि उनै गिरीहरू कर्लुंगमा आएर बसोबास गर्न थाले । अहिलेका कैनीहरुले त्यो भू-भाग किनेर आएको हुनाले ‘किनिएको’ वा ‘किनी’ शब्दबाट अपभ्रंश हुँदै अहिलेको कैनी थर रहेको किंवदन्ती रहेको छ । हुन पनि कैनी थरका मानिसहरु मेरो नेपालको अन्य भू-भागमा नरहेको र कर्लुंग वा यसको आसपासमा मात्रै रहेको हुनाले यो सत्य पनि हुन सक्छ । गोर्खाको मर्श्यांदी किनारमा केही कैनी परिवार रहे पनि उनीहरु पनि कर्लुंगबाट नै गएका हुन् । यो अर्थमा अहिले संसारमा विभिन्न मुलुकहरु र नेपालको केही ठाउँमा रहेका सबै नेपाली कैनीहरु हाम्रो निकट आफ्नै मानिस वा परिवारका सदस्यहरु हुन् भन्न मलाई कुनै गाह्रो छैन ।
मेरो मामाघर पनि कर्लुंग हो । म सानो छंदा हरेक वर्ष दुई चार पटक मामाघर जान्थे । बिशेष गरी चाडपर्व जस्तै दशैं, जनै पूर्णिमा आदीका बेला मामाघर जानु मेरो लागि खुसीको कुरा हुन्थ्यो । मामाघर गएको बेला हरेक पटक बिहान पख मामाघरको दाई अर्थात मेरो मामाको छोराहरुसंग कर्लुंगको ठाँटी जानु र गफ सुन्नु रमाइलो लाग्थ्यो । त्यहाँ धर्म, खेतीपाती, अन्नबाली, मौसम, राजनीति आदि हरेक बिषयमा कुरा हुन्थ्यो । त्यहाँ कतिपयको लागि चिया खाँदै बुढापाका र ठूलाबडाहरुको कुरा सुन्नु र गफ गर्नु एक प्रकारको नियमित कार्य हुन्थ्यो ।
विकासका अर्थमा कर्लुंगमा अहिले केही परिवर्तन आएको छ । उती बेला त्यहाँ खानेपानीको असाध्यै दु:ख थियो । अहिले कर्लुंगको तल रहेको खानेपानीको श्रोतबाट मोटरले पानी तानेर खानेपानीको ब्यबस्था गरिएको छ । कुनै बेला कर्लुंग जान पृथ्वी राजमार्गको कमलबारी वा देउरालीबाट झन्डै एक घण्टा उकालो हिड्नु पर्थ्यो । अहिले त्यहाँ मोटरबाटो पुगेको छ । केही समय अघि गाउँ कै एक जना भाईले कर्लुंगबाट दमौली जाने बसको फोटो फेसबुकमा राखेको देख्दा मेरो मन अति खुसी भयो । त्यहाँ बिजुली पनि पुगेको छ । मोबाइ ल फोनले गर्दा संचारको माध्यम पनि सहज भएको छ । अहिलेको जमानामा आधुनिक मानिसलाई चाहिने धेरै कुराको ब्यबस्था छ त्यहाँ । उचित स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक स्कुलको लागि भने केही पर जानु पर्ने अवस्था छ ।
मेरो छोराछोरी दुवै जना काठमाडौँमा जन्मे र लण्डनमा बढे, पढे र हुर्के । जसरी मलाई कर्लुंग प्रति अगाध माया र मिठो सम्झना छ, त्यसरी नै उनीहरु कर्लुंगको माया त नगर्लान । यो स्वाभाविक पनि हो किनकि मेरो जस्तै त्यस्तो केही सम्झना छैन उनीहरुमा । तर, म चाहान्छु मेरा केटाकेटीहरुले हाम्रो पुर्खा, हाम्रो माटो, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो आफ्नै जरोकिलोको बारेमा आवश्यक जानकारी राखुन । त्यही हेतुले म सन् २०१६ मा सपरिवार नेपाल जाँदा पृथ्वी राजमार्गबाट झन्डै एक घन्टाको ठाडो उकालो हिंडेर हामी केटाकेटी सहित कर्लुंग पुगेका थियौं । त्यति बेला उनीहरु खुब रमाए । आफ्नो पुर्खाहरुको बारेमा थोरै भए पनि जानकारी लिए । उनीहरु मात्रै हैन भविष्यमा मेरा नाती नातिनीहरु त्यहाँ पुगुन र मेरा सन्ततिहरुले पनि केही न केही योगदान दिउन भन्ने मेरो चाहना छ । मलाई पनि मेरो पुर्खाको त्यो गाउँ र ठाउँको लागि केही न केही गर्नु पर्छ भन्ने मनमा छ । भाग्य र समयले साथ दिए मेरो मनको इच्छा एकदिन पुरा हुनेछ ।
बाल मस्तिष्कमा जे कुरा पर्छ त्यो धेरै पछिसम्म अमिट छाप परेर बस्छ । मेरो हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । कर्लुंग र मेरो पुर्खाहरुको बारेमा सानोमा मैले जाने र सुने त्यो अहिले पनि त्यत्तिकै ताजा छ । म जहाँ जन्मे, हुर्के, बढें र पढें म जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि त्यो ठाउँ मेरो लागि उत्तिकै प्यारो छ र रहनेछ । अहिले यो लेख लेखि रहंदा मेरो मनमा मेरो गाउँ कर्लुंग प्रति अगाध माया र सम्झना पलाएको छ ।
मलाई थाहा छ, यति बर्णनले कर्लुंगको बारेमा जान्न र बुझ्न सकिन्न । कर्लुंगसंग मेरो गहिरो नाता र त्यो ठाउँको धेरै सम्झनाहरु छन । कर्लुंगको बारेमा बिस्तृतमा लेख्ने हो भने एउटा पुस्तक नै तयार हुन्छ । कर्लुंगको इतिहास, प्रकृति, त्यहाँको राजनीतिक सचेतना, हावापानी, रहनसहन आदीको बारेमा जति लेखे पनि अपुरो हुन्छ । तरपनि मैले मेरो सम्झनालाई लेख्ने प्रयास गरें । यो मेरो सानो प्रयास मेरो गाउँ कर्लुंग प्रति समर्पित गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । अहिलेलाई यति नै, अस्तु ।
(लेखक डा कैनी हाल बेलायतको विश्वबिद्ध्यालयमा प्राध्यापन र क्विन एलिजाबेथ अस्पताल, लण्डनमा बरिष्ठ ब्यबस्थापकको रुपमा काम गर्छन । उनी बेलायतमा राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । बेलायतको डार्टफोर्ड जिल्ला काउन्सिलको काउन्सिलरमा निर्वाचित भई चार बर्षे कार्यकाल पुरा गरेका उनी सन् २०१७ को बेलायतको आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीको तर्फबाट सांसदको उम्मेदवार समेत बनेका थिए ।)
केही ठाउँमा भएको हारका आधारमा समग्र परिणामलाई हेरिनु हुँदैन
कहिले पूरा होलान् नेकपाका लाखौँ सदस्यका यी अपेक्षाहरु ?
डिआईजी पोखरेलको ‘फास्ट ट्रयाक’ छलाङको तरङ्ग
यति समूहलाई दरबारमार्गको सरकारी जग्गा: ७ अर्ब लिनुपर्नेमा डेढ अर्ब मात्रै
राजनीति सुधार्न सबैले चासो दिनुपर्छ : मन्त्री भुसाल
आमा पोखरा पुगेका बेला घरमा रहेका छोराछोरी भाईद्वारा ‘अपहरण’
प्रचण्डपत्नी सीताको आयुर्वेदिक उपचार बाबा रामदेवले गर्दै
अर्घाखाँची सिमेन्टले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई टेरेन
पूर्वराष्ट्रपति मुशरर्फको शव ३ दिन झुण्ड्याउन अदालतकाे आदेश
बालुवाटार प्रकरणमा मुद्दा चलाउने तयारी
हत्या भएको आशंकामा जल्दै गरेको शव नियन्त्रण
घुस लिएको अभियोगमा वडाध्यक्ष पक्राउ